Muhiimad intee la eg ayay Soomaaliya iyo Mareykanka u leedahay billowga Howl-Gallada Diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya?
Wasaraadda Arrimaha Dibedda Mareykanka, ayaa shalay si rasmi ah ugu dhowaaqday billowga Howl-Gallada Diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya.
War saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, ayaa lagu sheegay in howl-galkan cusub uu sawir ka bixinayo sii wadista dadaallada dowladda Mareykanka ay dib ugu soo celineyso xiriirkii ay la lahayd Soomaaliya.
Sidoo kale, war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa lagu sheegay in Dowladda Somalia ay soo dhaweyneyso talaabadan, diyaarna u tahay inay sii xoojiso xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Mareykanka.
Hadaba Talaabadan, muhiimad intee la eg ayay u leedahay Soomaaliya iyo Mareykanka?, Waxaan arrintaas ka wareysanay Professor Cabdiwaaxid Qalinle, oo ka mid ah Aqoonyanka Soomaaliyeed, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Fallanqeynta Howlgalka Mareykanka
Ciidamada Turkiga oo Galay Dalka Ciraq
Dagaal Dhexmaray Ahlu-Suna & Galmudug
Fallanqeyn: Nuxurka Qoraalkii Jawaari
Wareysi: Wasiirka Arrimaha Dibedda DF